SEXUALITY: Xeelad fudud oo ka soo horjeeda awood la'aan - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • QODOBO • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • aan caadi ahayn • Galmada iyo xiriirada »SEXUALITY: Xeelad fudud oo ka hor imaanaysa awood la'aan
SEXUALITY: trick fudud oo ka dhan ah awood la'aanta
Eliseo Emma Kamgang 18 March 2019
wuxuu wadaagaa khibradiisa:
Waxa aan ka hadlayo kuu sheegi waa aad u ceeb. Laakiin haddii jinsigaaga noloshaadu uu ka xanuunsan yahay mid aan caqli gal ahayn, waa inaad sii wadataa akhriska .
Qof walba iimaan, magacaygu waa Maxime. Waxaan ahay 56 sano jir halkan waa sheekadayda.
Xitaa haddii aan jeclahay xaaskeyga oo aan helo si aan macquul aheyn Anigu ma dabooli karin baahidiisa sariirta. Waxay siisay aragtida ah inay noqoto mid foolxumo oo aan loo baahnayn ... waxaana dareemay inaanan ahayn nin.
Qeybta ugu liidashada waa tan Anigu ma fahmin dhibaatadeyda . Maxay tani u dhacday? Intii u dhexeysay 20 jir iyo sodon jirkeyga marnaba wax dhibaato ah ma qabin. Dhab ahaantii,waa run dhibaatadu waxay ahayd si aan u xakameeyo saplings waalan . Habeenka oo idil waan kari karnaa oo aanan daalanayn, dumarkana waxay ku raaxaystaan ​​hal mar, laba jeer ama saddex jeer, si fudud. dumarka hal mar, laba jeer ama seddex jeer, si fudud.
Marnaba uma maleyneynin inaan halkaan imid, laakiin waan sameeyay. Aad ayaan u daalay Anigu ma aanan dooranWaa inaan tijaabiyaa kiniinnada sida Viagra, Levitra iyo kuwo kale. Waxay igu caawisay wax yar marka hore, taasi waa hubaal, laakiin markaa waxaan bilaabay inaan saameyn xun ku yeesho, sida shuban iyo lallabo. Argh.
Si aad uga baxdo, Viagra ma aha mid fudud daawo aan loo baahnayn . Dhammaan waxa uu sameeyo waa la bixiyaa xalka ku meelgaarka ah ee dhibaatada halista ah : Maqnaanshaha . Intaa waxaa dheer, daawooyinkaas ma aha oo kaliya khatar, laakiin sidoo kale aad qaali u ah . Waa inaan helaa wadnaha dhibaatada.
Bal qiyaas sida aan ugu faraxsanahay markii aan ogaaday in ay jiraan baadhayaal xirfadlayaal ah oo raadinaya xalka, aniga oo kale. Shirkadaha dawooyinka ma rabaan inaad ogaato, laakiin waxaa jira hab sahlan oo lagu daaweeyo caqli-celinta iyo murgasho, hal mar iyo dhammaanba.
Waxaad qiyaasi kartaa sida ay ugu faraxsaneyd waqtigeeda Ugu dambeyntii anigaa isbartey in habka dhabta ah wuxuu shaqeeyaa . Habeenkaas Xaaskeyga ayaa si adag u garaacay in maalinta ku xigta ay si fudud u socon karto!
Waxaan ugu yeeray saaxiibkayga ugu fiican ee sidoo kale ka soo jilay awood la'aan iyo waxaan u sheegay wixii aan isku dayay . Markii ugu horraysay ayuu ka shakisan yahay, waana uu saxay. Anigu ma aanan rumaysan. Inkasta oo uu aad u xishoonayo inuu si cad u sheego, waan ogaa inuu u baahan yahay sida ugu badan ee aan sameeyay.
la yaab leh, waxay u shaqaysay isaga sidoo kale ! Kadibna wuxuu la hadlay saaxiibo yar yar, waqti yarna waxaan lahaa koox yar oo taageerayaal ah oo ixtiraamay sababtoo ah waxaan ka caawiyay inay galmo dib ugu galaan noloshooda jinsiga.
Waxaan u maleynayay in aan caawin karo rag badan habkan sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan sameeyo video gaaban si ay u muujiyaan wiilasha sida nolosha loogu celiyo musqulaha jilicsan. Ka feker raaxada nimankan markay arkeen ma aha oo kaliya in ay tahay gabi ahaanba BILAASH AH, laakiin waa ammaan iyo waa la samayn karaa guriga!
Ha sugin, daawee fiidyowgaan . Baro waxa kumanaan qof oo ka dhigaya kuwo waalan. Waxaa loo sameeyay qaab cilmi ah oo la tijaabiyey kaasoo daaweyn doona awooddaada hal mar iyo dhammaanba.
Jooji mootada sababtoo ah ma dhali kartid. Jooji inaad u jiifto xaaskaaga ama saaxiibadaa. Jooji feejignaanta sababtoo ah fiidnimadii kale ee niyadjabsan sababtoo ah ma aysan fulinin rabitaankiinna. Bilow fucking sida marna ka hor! Mar labaad ayaad ku faani doontaa ... waxayna kuu mahadcelineysaa.
Fiiri fiidiyowga hadda iyo bogsiinta caajisnimadaada >>
Waxaan helnay seddexleyda si ay labalaabaan hilqadiisa isaga oo aan ku dhex marin sanduuqa dalbaday
Eyga geesiga ah ayaa ka badbaadiya ilmaha ilmo khatar ah - SANTE PLUS MAG